Ciidanka amniga oo howlgal ka sameeyay magaalada Jowhar | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Ciidanka amniga oo howlgal ka sameeyay magaalada Jowhar
Ciidanka amniga oo howlgal ka sameeyay magaalada Jowhar
Ciidamada Booliska maamulka Hirshabeelle iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa lagu soo waramayaa inay saacadihii la soo dhaafay howlgalo amniga lagu sugayo ka sameeyay Xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda Maamul Hrshabeelle Howlgalkaan oo ujeedkiisu ahaa adkeynta amniga magaaladaasi.
Muddada uu howlgalka socday ciidamada waxay baarayeen gaadiidka, goobaha ganacsiga, guryaha iyo dadka qaar oo ciidamadu ay ku tuhmeen inay qeyb ka yihiin falalka amni daro ee magaalada ka dhaca.
Taliye ku-xigeenka Saldhiga Booliska magaalada Jowhar Labo Xidigle Xasan Cabdulle Dhaqane ayaa warbaahinta Dowladda Soomaaliya u sheegay in howlgalka lagu soo qabtay labo ruux oo la tuhmay haddana lagu haayo saldhiga booliska magaalada Jowhar.
Taliyaha waxa uu sidoo kale u mahadcliyay shacabka ku nool caasimadda Hirshabeelle oo la sheqeeyay inta ay howlgalka wadeen ciidamadu.
Howlgalkaan ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli magaalada Jowhar ay u diyaar garboobeyso hadii lagu heshiiyo doorashada Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Fedraalka Soomaaliya.
Dhanka kale Ciidamada ammaanka Maamul Goboleedka Puntland ayaa howlgallo ka Sameeyay Xaafado ka tirsan Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari, halkaasoo dhowr jeer ay ka dhaceen falal amni darro.
Howlgalkaan ayay Ciidamada waxaay ka sameynayaan xaafaha qaar iyo wadooyinka, iyagoo baaritano ku sameynayay Gaadiidka nooca raaxada ah, halka Guryaha qaar ay galayaan.
Qoral kasoo baxay Ciidanka PSF, ayaa lagu sheegay in Ciidamada ay Xaafadaha Magaalada Boosaaso ka baadi goobayaan Shaqsiyaad ka tirsan Kooxaha loogu yeero argagaxisada, oo doonayay inay weeraro ka fuliyaan Magaalada Boosaaso.
Sidoo kale waxay sheegeen inay sii wadi doonaan hawlgallada amniga lagu adkaynayo, iyagoo shacabka ugu baaqay inay Ciidamada la wadaagan hadii ay arkaan waxyaabo lidi ku ah amniga.
Magaalada Boosaaso ee Xarunta gobolka Bari ayaa waxaa dhowr jeeroo hore ka dhacay qaraxyo kala duwan oo ay waxyeelo kasoo gaartay, mas’uuliyiin, askar & dad Shacab ah.
Previous articleRaila oo kulamo ku saabsan BBI ka wado Kisumu
Next article2 qof oo ku dhimatay shil ka dhacay wadada Eldoret – Webuye